शिक्षा - नारी
मीना भट्टराई (अप्रेसन हेड, आदिम कलेज)अनलाइन कक्षा कत्तिको प्रभावकारी छ ?भच्र्युअल कक्षामा हामी अभ्यस्त नभएकाले सुरु–सुरुमा निक्कै गाह्रो भयो । बिस्तारै बानी पर्दै गएपछि सहज भएको छ । फेरि कोरोना महामारीमा यसको विकल्प पनि त छैन । धेरैले यो प्रविधिसँग सम्बन्धित सीप लिएपछि यसको प्रभावकारिता पनि बढेजस्तो लाग्छ ।भच्र्युअल कक्षाका फाइदा र बेफाइदा के–के छन् ?घरैमा बसेर पढ्न र सिक्न पाइने, समयको बचत हुने यसका फाइदा हुन् । स्वास्थ्यमा पर्न जाने विविध प्रकारका असरका साथै अनलाइन गेमप्रति बालबालिकाहरूमा लत बस्नु यसका बेफाइदा हुन् ।थप प्रभावकारी बनाउन के आवश्यक पर्ला ?नेपालका हरेक जिल्लामा सर्वसुलभ मूल्यमा इन्टरनेटको पहुँच हुनुपर्छ । सरकारले शिक्षामा बढी लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यार्थीका लागि यस्ता प्रविधियुक्त सामग्री खरिदमा विद्यार्थीलाई छुट र ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । इन्टरनेटमा गेम बन्द गरिदिए हुन्छ । अनलाइनले गर्दा पढाइ बिग्रियो, बालबालिकाका लागि आवश्यक पढाइ पुगेन भनिन्छ नि, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?निश्चित रूपमा पढाइ पुगेको छैन । कतिपय प्राक्टिकल कक्षा अनलाइनमार्फत सम्भव छैन । पढाइ बिग्रियो भन्ने सन्दर्भमा कतिपय विद्यार्थी कक्षा सञ्चालन भइरहँदा भिडियो अफ गरेर अन्तै गइदिन्छन् । एकाउन्ट, गणित, विज्ञानलगायतका विषयमा प्राक्टिकल पुगिरहेको छैन ।
नारी संवाददाता , भाद्र २२, २०७८
अब शुरु हुदैंछ आधिकारिक अनलाइन शिक्षा
चैत्र महिनामा अन्तमा परीक्षा लिएर रोकिएको स्कुल कलेजको पढाइ अझैं ठप्प अवस्थामा छ । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण शिक्षा क्षेत्रमा अहिले ब्यापक असर त परेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा परेको असरलाई केही न्यूनिकरण गर्न अहिले विभिन्न शिक्षण संस्थाले अनलाइन प्लेटफर्मको सदुपयोग गरी कक्षा सञ्चालन गरिसकेका छन् ।
लक्ष्मी भण्डारी, वैशाख १९, २०७७
शिक्षा विभागले बनायो बालबालिकालाई घरमै पढाउने सामग्री
शिक्षा विभागले पनि घरमै बसेर बालबालिकालाई सिकाउन सकिने सामग्री बनाएको छ । प्रि–प्राइमरी अर्थात पूर्व प्राथमिकत तह र कक्षा एकको लागि विभागले घरमा गराउन सकिने सिकाइ र क्रियाकलापको लागि विद्युतीय किताबनै बनाएको छ । जसमा बालबालिकाले सिक्न र पढ्न सक्नेछन् ।
नारी संवाददाता , वैशाख ९, २०७७
परीक्षा तयारीका तीन चरण
परीक्षा नजिकिँदै जाँदा आउने सम्भावित प्रश्नहरुमा लक्षित गराइन्छ । यो बिधिमा विद्यार्थीले पर्याप्त मात्रामा रिभिजन गर्न सक्दछन् । परीक्षा नजिकिएसँगै तालिका बनाएर पढ्नु उचित हुन्छ । यसो गर्दा समय व्यवस्थापन हुन्छ ।
प्रकृति दाहाल, चैत्र २४, २०७६
केही मन्टेश्वरी स्कुल
डिजिटल पाठ्यक्रममा पेन र किताब आफैं बोल्छन्, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यो बढी प्रभावकारी र रमाइलो हुन्छ ।’ यहाँ नेपाली कला, संस्कृतिको जगेर्ना हुने गरी पाठ्यक्रम विकास गरिएको छ ।
नारी संवाददाता , चैत्र १५, २०७६
मन्टेश्वरी : प्रभावकारी शिक्षण पद्धति
घोकन्ते र परम्परागतको सट्टामा आधुनिक, प्रविधियुक्त र बालमनोविज्ञानलाई मध्यनजर गरी सिकाइने यो शिक्षण विधिप्रति अभिभावकएवम् बालबालिकाको आकर्षण बढ्दो छ । विद्यालय स्तरको पढाई सुरु हुनुभन्दा अघि बालकालिकालाई सिकाउन अपनाइएको उक्त विधि निकै प्रभावकारी मानिन्छ ।
लक्ष्मी भण्डारी, चैत्र १३, २०७६
के हो मन्टेश्वरी शिक्षा ?
मन्टेश्वरी शिक्षा घोकन्ते र परम्परागत सैद्धान्तिक शिक्षाभन्दा ठीक विपरीत छ । यसमा पुस्तक पढ्न, होमवर्क गर्न, पाठ कण्ठ गर्न लगाइँदैन । शिक्षकले लौरो देखाएर विद्यार्थीलाई तर्साउँदैनन् । बच्चाहरूलाई सैद्धान्तिक भन्दा व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिइन्छ ।
कुमुद भट्टट्ट छतकुली, चैत्र ९, २०७६
कहिले–कसरी सुरु भयो मन्टेश्वरी शिक्षा ?
इटालियन नागरिक मारिया मन्टेश्वरीले विकास गरी अभ्यासमा ल्याएको एक शैक्षिक पद्धति हो–मन्टेश्वरी । जसलाई अहिले विश्वभर आत्मसात् गरिएको छ । चिकित्सकीय क्षेत्रमा संलग्न उनले मानसिक रूपमा कमजोर, अशक्त बालबालिकालाई हेर्ने गरी रोम युनिभर्सिटीको मनोविज्ञान शाखामा इन्टन गर्न थालिन् ।
अञ्जु भट्टराई, चैत्र ७, २०७६
मन्टेश्वरी शिक्षाको आवश्यकता
बालबालिकाहरूलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, चाडपर्व तथा परम्पराहरूका बारेमा अवगत गराई त्यसको संरक्षण एव सम्वद्र्धन गर्न सिकाउँछ र तिनलाई निरन्तरता दिन सक्षम बनाउँछ ।
नारी संवाददाता , माघ ९, २०७५
मायालु वातावरणमा मन्टेश्वरी शिक्षा
दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनु भनेको मुलुक समृद्धिको बाटोतर्फ थप एक कदम अघि बढ्नु हो । एउटा अब्बल व्यक्तिले देशका लागि जति योगदान गर्नसक्छ सय जना असक्षमले पनि त्यति गर्न सक्दैनन् । ह्युमेन डेभलपमेन्ट नै मुलुकको विकासको पहिलो खुड्किला हो ।
लक्ष्मी भण्डारी थापा, चैत्र ५, २०७४
शिक्षामा आमाको भूमिका
‘आमाको काख नै शिशुको पहिलो पाठशाला हो ।’ यो भनाइ जति प्रचलित छ उति नै सान्दर्भिक पनि । आमाको काखबाट तोतेबोली सिकेका शिशुले त्यहीँबाट जीवन उपयोगी पाठ सिक्छन् ।
नारी संवाददाता , चैत्र ८, २०७३